Sport – MMANIME
Inazuma Eleven Go Vs. Danbourusenki Inazuma Eleven Go Chrone Stone episode30အပြီးမှာထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့Inazuma Eleven Go vs Danball Senki movieလေးကိုဒီတစ်ပတ်မှာပူးတွဲတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဘောလုံးကန်ခြင်းအထူးခေတ်စားသောInazuma Elevenကမ္ဘာနဲ့ LBX(Little Battlers Experience)လို့ခေါ်တဲ့စက်ရုပ်လေးတွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ကြတဲ့Danball Senkiကမ္ဘာတို့လို အပြိုင်စကြဝဠာနှစ်ခုကြားက နံရံကြီးပြိုပျက်သွားတဲ့အခါမှာတော့... ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာLBXတွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီး အားလုံးကိုဖျက်စီးပစ်ရင်းက လူငယ်ဘောလုံးစတားဖြစ်တဲ့ Matsukaze Tenmaနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်းအရင်းကိုစုံစမ်းနေတုန်း LBXအသုံးပြုသူYamano Banနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။သူတို့ဟာNation A(danballကမ္ဘာရဲ့အမေရိက)ကNICS(Neo International Cosmic Section)ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စား LBXတွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတွေပါ။သူတို့နှစ်ဖွဲ့အချင်းချင်းသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ဘောလုံးရောLBXရောကိုအမြစ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့villainအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ကြတာတွေကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမယ့် movieလေးဖြစ်ပါတယ်
Inazuma Eleven Go Vs. Danbourusenki
Kuroko no Basket Movie 1: Winter Cup Soushuuhen – Kage to Hikari Genres – Sports, School, Shounen Duration – 1 hr. 27 min. Rating –PG-13 – Teens 13 or older Subtitle – Myanmar Subtitle Translated By – Zay Yell / Encoded By – Aung Kyaw Khant Resolution – 1920 x 1080
IMDB: 8/10 51 votes
Inazuma Eleven Go The Raimon team has been invited by Fifth Sector strangely toasoccer camp. When they agree, things go out of hand since it was revealed that Fifth Sector wants to eliminate them once and for all on the island called God Eden. Now, the Raimon team needs to train harder to be able to show that they have the ...
IMDB: 7.1/10 tt1794796 votes